कांग्रेसका ८ सांसदको संविधान संशोधन विधेयकमा नेतृत्व मौन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको दुई दिन बित्दासमेत पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको छैन । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेललगायतका अधिकांश शीर्ष नेताले सकभर यस विषयमा बोल्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्ने युवा नेता पनि मौन छन् ।
पार्टीले ढिलो गर्ने बुझेपछि दर्ता गराएका हौं, हामीले मधेस र पार्टीलाई जोगाएका छौं । – उमाकान्त चौधरी
जेष्ठ २२, २०७७ कूलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — आफैले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर पार्टीका ८ सांसदले मंगलबार संसद् सचिवालयमा विधेयक पुन: दर्ता गराउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिक्रियाविहीन छन् । विधेयक दर्ता भएको दुई दिन बित्दासमेत पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका अधिकांश शीर्ष नेता पनि सकभर यस विषयमा बोल्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उनीहरू पनि बोल्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्ने युवा नेता पनि मौन छन् ।
छिनछिनमा ट्वीटमा छाइराख्ने र पार्टीको धारणा भनेर जानकारी गराइराख्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासमेत सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर मौनता देखाइरहेका छन् ।
संसदीय दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकलाई पुन: दर्ता गराउन दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दलले संस्थागत रूपमा दर्ता गर्ने छाँट नपाएपछि तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव, पद्मनारायण चौधरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत ८ सांसदले विधेयक दर्ता गराए । तर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यसबारे न त दलको धारणा अघि सारेका छन्, न त उनी सम्पर्कमा आउन सकेका छन् । दुई दिनदेखि उनको टेलिफोन उठ्न छाडेको छ ।
विधेयक दर्ता गराउनुअघि दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई संशोधनकर्तामध्येका सांसद उमाकान्त चौधरीले सम्पर्क गर्न धेरै प्रयत्न गरेका थिए । चौधरीका अनुसार दलका तर्फबाट तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने देखेपछि आफूहरूले दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि जानकारी गराउन उनले सभापति देउवालाई सम्पर्क गर्न उनका स्वकीय सचिव भानु देउवासँग फोन गरेका थिए । सभापति देउवा सम्पर्कमा नआए पनि भानुमार्फत दलका प्रमुख सचेतक खाँणसँग सम्पर्क गरेर दर्ता गर्नू भन्ने जवाफ आएको थियो । चौधरीले दिनभरजसो खाँणलाई फोन गरे । तर उनको फोन उठेन । ‘प्रमुख सचेतकको फोन नउठेपछि फेरि मैले सभापतिलाई फोन गरें । सभापतिसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन, त्यसपछि पार्टीकै निर्णयलाई आधार मानेर हामीले विधेयक दर्ता गराएका हौं,’ चौधरीले भने, ‘पार्टीको निर्णयविपरीत गएका छैनौं ।’
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयसँग नजोडीकन तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएको विधेयक पुन: दर्ता गर्ने गराउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । तर पार्टी सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकपछि मात्रै दर्ता गराउने मनस्थितिमा थियो । त्यस्तो जानकारी पाएपछि नै तत्काल संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निचोडमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पुगेका थिए ।
‘संविधान संशोधन बारम्बार भइराख्ने विषय होइन । फलाम तातेकै बेला हो यसलाई अघि सार्ने,’ चौधरीले भने, ‘अहिले हामीलाई बदनाम गराउने प्रयास पनि भएको छ । तर हामीले मधेस र जनताको हितका लागि काम गरेका हौं । यसले पार्टीको पनि हित भएको छ ।’
विधेयक दर्ता गराएपछि यसको स्वामित्व पार्टीले लिन्छ कि लिंदैन भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको छ । कांग्रेस उपसभापति निधिको जवाफ भने विधेयक दर्ताको पक्षमा छ । ‘पार्टीेले निर्णय गरेपछि कांग्रेसको होइन भन्न कसरी मिल्छ ? उनले भने, ‘यो विधेयक पार्टीको निर्णयअनुसार दर्ता भएको हो । स्वामित्वको प्रश्न छैन । यसलाई संसद् भित्र र बाहिरबाट समर्थन जुटाउने माहोल खडा गर्नुपर्छ ।’
निधिकै पहलमा शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संविधान संशोधन विधेयक दर्ताको निर्णय लिन बाध्य भएको थियो । यसबारे प्रस्ताव निधिले नै अघि सारेका थिए । त्यसअघि केन्द्रीय बैठकमा यस्तो एजेन्डा प्रवेश भएकै थिएन । यसको मुख्य कारण मधेसको एजेन्डा कसले बोक्ने भन्ने मुख्य सवाल थियो । राजपा र समाजवादी पार्टीले संशोधनको मुद्दा अघि सारिसकेपछि मधेसबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद तथा नेताहरूलाई दबाब परेको थियो ।
‘मधेसको मुद्दा किन उपेन्द्र (यादव) र महन्थ (ठाकुर) लाई जबर्जस्त जिम्मा लगाउने ? संविधान जारी हुँदानहुँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार नै मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानका दुईवटा धारा संशोधन गर्न तयार भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चारवटा विषयमा संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरायो, भलै संसद्बाट त्यो अस्वीकृत भयो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मधेसी दलले खासमा संशोधन चाहेका होइनन् । उनीहरूलाई मुद्दा मात्रै चाहिएको हो । मधेसको एजेन्डा बोक्ने पार्टी कांग्रेस नै हो । राजनीतिक रूपमा हामीले सही निर्णय लिएका छौं, मधेसलाई पनि जोगाएका छौं, पार्टीलाई पनि बचाएका छौं । यति नगरे त हामी मधेस छिर्न पनि सक्दैनथ्यौं ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने दुई दिनअघिबाटै झापामा थिए । संविधान संशोधनको मुद्दा कांग्रेसको एजेन्डा भएको र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तत्कालीन पार्टी सभापतिको नेतृत्वले अघि बढाएकै संशोधन विधेयक अघि बढाउनेबारे निर्णय लिएको उनले बताए तर अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयक पार्टीको हो कि होइन भन्ने सवालमा खुलस्त हुन चाहेनन् । त्यसबारे आधिकारिक धारणा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबाट आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
संशोधन विधेयक आएपछि सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा कांग्रेस एक ढिक्का होला कि नहोला भन्ने अर्को संशय पनि खडा भएको छ । कांग्रेस उपसभापति निधिले पार्टीको निर्णयविपरीत कोही नजाने बताए । ‘सरकारले ल्याएको सीमासम्बन्धी विधेयक छुट्टै हो, यसमा पार्टीले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक जोडिंदैन, जोडिएको पनि छैन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले दर्ता गराएको संशोधन मधेसी, थारू, दलित र महिलाको एजेन्डा हो । यसमा हामी कसैको विमति छैन ।’
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले पार्टीका ८ सांसदले दर्ता गराएको विधेयकले कुनै अन्योल खडा नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अरूले संस्थागत निर्णय गर्लान् वा नगर्लान् । अरूले समर्थन देलान् या नदेलान्, कांग्रेसले अद्यावधिक नक्सा निसाना छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा दायाँबायाँ हुन दिँदैन, कुनै स्वार्थबेगर, किन्तु, परन्तुबेगर एक ढिक्काले समर्थनमा मतदान गर्छ । यो मुद्दा हाम्रो हो ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०९:४१
लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली मुलुकसँगको अनुदान सम्झौता गिजोलिनुमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली मूल रूपमा जिम्मेवार छ ।
जेष्ठ २२, २०७७ सूर्यराज आचार्य
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रमसम्बन्धी एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता केही महिनादेखि चर्चा र विवादमा छ ।
आठ धारा, सात अनुसूची रहेको र नेपालको संसद्बाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसीसी सम्झौताका आम चर्चामा रहेका आपत्तिजनक भनिएका प्रमुख बुँदा हुन्— दफा ७.१, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि रहने । दफा ३.८, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको । दफा ५.१, एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । दफा ३.२ (ख), कार्यान्वयनका लागि गठित निकाय, एमसीए– नेपाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रमसम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी, तर अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थानुसार खटनपटन भने एमसीसीको । दफा ३.२ (च), बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार । अनुसूची ५ (क), नेपालभित्रै निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनाबारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने सर्त । अनुसूची ५ (ख), विद्युतीय नियमन आयोग ऐनबारेको सर्त । यीबाहेक आयोजनाको रोजगारीमा विदेशीलाई समेत बिनासर्त खुला, कर छुट लगायतका विषय पनि विवादमा छन् ।
यसका अतिरिक्त आम चर्चामा त्यति नआएको सम्झौताको दफा ५.५ मा ‘कायम रहने’ शीर्षकअन्तर्गत ‘सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ७.४ ले सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष किटान गरे पनि दफा ५.५ ले आठ वटा दफा अनन्तकालसम्मै लागू हुने हो कि भन्ने अर्थ लगाउँछ । यी दफामध्ये केही कर र लेखापरीक्षणजस्ता वित्तीय कार्यविधिसम्बद्ध छन् भने, केही अलि दूरगामी प्रभाव हुन सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तो, दफा ६.४ ले यी दफासहित यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिलाउँछ । दफा २.७ को प्रावधानले एमसीसीको फन्डिङको उपयोग (अर्थात् यसबाट निर्मित पूर्वाधारको उपयोग) अमेरिकाको कानुन वा नीतिविपरीत नहुने (सोबारे अमेरिकी सरकारले लिखित रूपमा नेपाललाई जानकारी गराउन सक्ने) कुराको सुनिश्चितता खोज्छ । त्यस्तै, ३.७ (ग) ले गर्दा अनन्तकालसम्म एमसीसीका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई आयोजनास्थलमा बेरोकटोक प्रवेशको अनुमति दिनुपर्नेछ । यी सबै बाध्यकारी प्रावधान अनन्तकालसम्म कायम रहने दफा ५.५ को आशय हो भने, सम्झौताको यो प्रावधान निश्चय नै गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष सर्त सम्झौतामा छैन । तर सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधानले गर्दा नेपालको कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायअनुसार लागू हुनुपूर्व नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगमा संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने किसिमको सम्झौता किन ? र, यसले भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? अरू द्विपक्षीय दाताले पनि संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका सम्झौता प्रस्ताव गरेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो होला ? यी प्रश्न अस्वाभाविक छैनन् ।
सम्झौताका माथि उल्लिखित विवादित प्रावधानका अतिरिक्त, अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ हो भन्ने अमेरिकी सरकारका केही उच्च अधिकारीको भनाइले गर्दा यो नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको र संविधानमै निर्दिष्ट असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप भएको तर्कलाई बल पुगेको छ । ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा नेपाललाई पनि तान्ने अमेरिकी प्रयासको चर्चासँगै सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको भए पनि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेको खबरले आम नागरिकको एमसीसीप्रतिको चासो बढायो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा आँच ल्याउन सक्ने भन्दै सत्ताधारी दल नेकपाको एउटा समूहले यो सम्झौता सच्चिनुपर्ने माग गरेपछि चर्चा र विवादले नयाँ उचाइ लियो । एमसीसीको सम्झौता र नेपालको अहित हुने यसका सम्भाव्य परिणामबारे किसिमकिसिमका अतिरञ्जनापूर्ण अडकलबाजीले पनि आम नागरिक तहमा चर्चाले ठाउँ पायो ।
सम्झौताका पक्षधरबाट भने नेकपाभित्रको आलोचक समूहलाई पार्टीको अन्तरसंघर्षमा एमसीसीलाई दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोप लगाइयो, जुन एक हदसम्म सही नै थियो । एमसीसीको आलोचनामा नेकपाबाहिर पनि ठूलै पंक्ति थियो । तर बहसको सुरुमा नेपालको एमसीसी प्रक्रियामा संलग्न केही विज्ञले सम्झौताको आलोचनालाई ‘अल्पज्ञान’ र अनावश्यक भावनामा बहकिएको नचाहिँदो प्रतिक्रिया भन्दै ठाडै खारेज गरिदिए । एमसीसीको विपक्षमा मात्र हैन, पक्षधरका यस्ता प्रतिक्रिया पनि अतिरञ्जनापूर्ण देखिन्छन् । वास्तवमा एकतर्फको अतिरञ्जनाले अर्कातर्फको अतिरञ्जनालाई उक्साएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथिको बहस ‘छलफल’ भन्दा ‘विवाद’ तर्फ डोरिएको छ ।
सत्ताधारी दल एमसीसीको मामिलामा विभाजित देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसी सम्झौताको अहिलेकै स्वरूपको पक्षमा छ । बौद्धिक समाज विभाजित छ । आम नागरिकमा अन्योलमिश्रित चिन्ता छ । संसद्बाट पारित हुने–नहुनेमा अनिश्चितता थपिएको छ । लामो समयदेखि नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको ५० करोड डलरको अनुदान सम्झौता किन यसरी गिजोलिने अवस्थामा पुग्यो ? यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाका लागि हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली मूल रूपमा जिम्मेवार छ । यो मुद्दाका बहुआयामिक पक्षमा गम्भीर समीक्षाको जरुरी छ ।
पहिलो, हाम्रो विकास योजना र आयोजना छान्ने कार्यविधि तदर्थ छ । हाम्रो विकास योजनाको प्रणाली चुस्त–दुरुस्त भएको भए कुनै सहयोगको प्रस्ताव आउँदा ‘नेपालको विकासको बाधक के हो ?’ भनेर दातैपिच्छेको कन्सल्ट्यान्टको रिपोर्ट आवश्यक पर्दैनथ्यो । हाम्रा आवधिक योजना र क्षेत्रगत गुरुयोजनाले तय गरेका प्राथमिकता र पहिचान गरेका आयोजनामा दाताको सहयोग परिचालन गर्न सक्थ्यौं । यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका भए एमसीसी सम्झौतामा प्रसारण लाइनको योजनामा भारतको समर्थन खोज्नुपर्ने सन्दर्भ उठ्दैनथ्यो । विद्युत् प्रसारण ग्रिड नेपाल भूमिभित्रको नेटवर्क संरचना हो । यसले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका आयात–निर्यात प्वाइन्टलाई समावेश गरेको हुन्छ र समग्र ग्रिड नेटवर्क विद्युत् आयात–निर्यातमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, हाम्रो वैदेशिक सहयोग परिचालन नीतिमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हाम्रोजस्तो देशमा पूर्वाधार लगानीका लागि राष्ट्रिय बचतको मात्र हैन, विदेशी मुद्राको पनि कमी हुन्छ । किनभने ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा हुने विदेशी वस्तु र सेवाको खरिदले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । केही वर्षदेखिको विप्रेषणको उच्च प्रवाहले गर्दा पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमाथिको निर्भरता कम हुने गरी हाम्रो वैदेशिक सहयोग परिचालन नीतिमा उल्लेख्य फेरबदल गर्ने हामीलाई अवसर थियो । तर त्यसतर्फ हाम्रा योजनाकार र नीतिनिर्माताको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । उल्टो पछिल्ला वर्षमा दाताहरूको संलग्नता नीतिनिर्माण र संस्थागत विकासका नाममा हाम्रो विकास पद्धति र कार्यविधिमा अन्योल हुने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा विस्तार भएको छ । दाताबिना विकास सम्भव छैन भन्ने परनिर्भर मानसिकताले राज्यसंयन्त्रमा जरो गाडेको छ । एमसीसी सम्झौताकै सन्दर्भमा विद्युतीय नियमन आयोग ऐन सर्तका रूपमा आउनु यस्तै कार्यशैलीको परिणाम हो । दाताका सर्त र दबाबबाट हुने संस्थागत व्यवस्था केही अपवादबाहेक असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।
तेस्रो, हाम्रो राज्यसंयन्त्रमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूसँगको सहयोग सम्झौताका लागि गृहकार्य, वार्ता र मस्यौदा तयारीमा आवश्यक दक्षताको कमी देखिन्छ । नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने सम्झौताको बहुचर्चित दफा ७.१ लाई अहिलेको जस्तो सोलोडोलो रूपमा नभएर आयोजना कार्यान्वयनमा नेपालको कुनै कानुनले बाधा पर्न गएमा नेपाल सरकारले अविलम्ब त्यस्तो बाधा फुकाउनेछ भनी राख्न सकिन्थ्यो ।
फिलिपिन्सको एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तै आशयको वाक्य राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (ख) ले त्यसै पनि दाताको खरिद निर्देशिका लागू गर्न छुट दिएको छ । साथै एमसीसी सम्झौताका विभिन्न दफा हेर्दा यो अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामाथि नेपालका तर्फबाट कुनै रस्साकस्सीबिना हुबहु स्विकारिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता तयारीका चरणमा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए प्रस्टसँग अमिल्दा देखिने केही बुँदाबाट सिर्जित अनावश्यक विवादको पक्कै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।
चौथो, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र कार्यशैलीमा निहित कमजोरी पनि एमसीसीको विवादमा प्रतिविम्बित भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यका नीतिनिर्माणमा राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विकसित मुलुकमा राजनीतिक दलका आफ्नै ‘थिंक–ट्यांक’ हुन्छन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति र कानुन संसद्मा पुग्नुपहिले दलभित्रै सघन अध्ययन र बहस हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलमा यस्तो परिपाटी छैन । एमसीसीको प्रक्रियामा अहिले संसद्मा रहेका दलहरूका धेरै नेता कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको पाइन्छ । तीमध्ये केही नेता अहिले एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । अहिले आएर यत्रो महत्त्वका साथ चर्चा भइरहेको एमसीसी सम्झौताबारे सुरुमै दलहरूभित्र किन छलफल भएन ? चुनाव घोषणा भैसकेपछि अर्थमन्त्रीले सम्झौतामा सही गर्ने हतारो किन गरे ?
पाँचौं, हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कूटनीतिक चातुर्य तथा भूराजनीतिक सतर्कतामा कमी देखिएको छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी शक्तिराष्ट्रको लहरमा उभिँदै छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र दाउपेच पेचिलो हुँदै छ । नेपालमा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चासो बढ्दो छ । द्विपक्षीय दाताहरूको वैदेशिक सहयोगमा दाताका रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक लगायतका स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन् । दाताका त्यस्ता स्वार्थ हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत छन् या छैनन् भन्नेमा हामी चनाखो हुनैपर्छ । यो कुरा एमसीसी, बीआरआईसहित सबै वैदेशिक सहयोगमा लागू हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका विविध पक्षउपर वस्तुगत निचोडमा पुग्न सकिने गरी स्वतन्त्र विज्ञको कार्यदल गठन गरेर सोको सिफारिसबमोजिम एमसीसीको सम्झौता संशोधन गर्नतर्फ सरकारले पहल गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो ।
ट्विटर : @suryaracharya
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०९:३४